Kheyre maku qanacsan yahay gabood-fallada Fahad Yaasiin? | KEYDMEDIA ENGLISH
Kheyre maku qanacsan yahay gabood-fallada Fahad Yaasiin?
Musharax Madaxweyne Xasan Cali Kheyre, oo in ka badan saddex sano la soo shaqeeyay Fahad iyo Farmaajo, isla-markaana ku baraarugsan danbiyada Fahad galay iyo gabood-fallada uu geystay ayaa go’aansaday inuu u diro hamabalyo diirran oo soo dhaweyn ah.
MUQDISHO, Soomaaliya – Ra’iisul Wasaarihii hore ee dalka, Xasan Cali Kheyre, ayaa noqday musharraxa kaliya ee u hambalyeeyay agaasimihii hore ee NISA, eedeysane Fahad Yaasiin oo isagoo magaciisii hore ka guuray Axaddii kursi ku soo boobay Baladweyne.
Kheyre oo sidaan oo kale hore ugu tahniyadeeyay shaqsiyaad eedo xooggan loo heysto oo Kullane Jiis iyo Saadaq Joon, qeyb ka yihiin, ayaa si weyn u soo dhaweeyay waxa uu ug yeeray guusha Fahad Yaasiin, ugu biiray baarlamaanka 11-aad ee JFS.
Fahad Yaasiin, waxaa dul-hoganaya eedo xooggan, oo ay ku jiraan isku dayga khaarijinta Madaxweynayaal hore, siyaasiyiin mucaarad ah, dilka saraakiil ciidan, oo ay ka mid tahay Ikraan Tahliil, dhallinyaro uu ka dagaal galay Itoobiya, iyo gobood-fallo kale oo daran.
Agaasimihii hore ee NISA, waxaa Maxakamadda CQS, kaga furan gal-dacwadeed, ku eedeynaya inuu yahay gacan ku dhiigle dilay Sarkaal ka tirsanaa Hay’adda Nabad-sugidda, waana mid ka mid ah sababaha ugu weyn ee ku riixeysa inuu helo xasaanad baarlamaan.
Tan iyo markii Kheyre laga tuuray xilka Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya, bishii July 2020, wuxuu ahaa siyaasiga kaliya ee afka ka dadanayay sheegidda khatarta Fahad Yaaiin ku hayo dalka, kaas oo xitaa isku dayay inuu isaga khaarijiyo 19 Feberaayo 2021.
Xilliyo kala duwan, waxaa Kheyre, hore loola xariiriyay inuu xiriir xooggan kala dhaxeeyo dilaaga Ikraan, Fahad, halka, tallaabada uu shalay qaaday ay mar kale abuurtay hadal heyn xooggan oo ku aaddan iyo Ra’iisul Wasaarihii hore la dhacsanaa gabood-fallada Fahad.
Kheyre, wuxuu qeyb ku lahaa mushkiladda dalka ku habsatay shanti sano ee la soo dhaafay, waana hir-galiyaha caburinta shacabka iyo siyaasiyiinta Muqdisho, mana jiro farqi weyn oo aragti ahaan u dhaxeeya isaga iyo Kooxda waqtigu ka dhamaaday ee fidnada u saaxiibka ah.
RW hore, Xasan Cali Kheyre, waa siyaasiga kaliya ee mucaaradka ku saf ah ee aan marnaba oggoleyn inuu hor yimaado saxaafadda, si loo weydiiyo su’aalaha shacabka ka dhex guuxaya, waana dhaqan ay caan ku yihiin Farmaajo, Fahad iyo shaqsiyaadka la shaqeeya.
Kheyre, wuxuu wax ka ogaa duullaankii 17 Dec 2017 lagu qaaday xarunta Xisbiga Wadajir, xayiraadda socdaalkii Madaxweynayashii hore [Shariif & Xasan] ee Baladweyne, dhiibistii Qalbi-dhagax, dhallinyarada loo qaaday Eritrea iyo burburintii baarlamaanka.
Kheyre, waa shaqsiga lahaa maskaxda in Ururka ONLF, lagu daro liiska argagixisada, waa muruqii kooxda waqtigu ka dhamaaday u adeegsatay duminta maamullada, waana shaqsiga amarka ku bixiyay xasuuq shacabka loogu geystay Baydhabo iyo Dhuusamareeb.